Liverpool Iyo Manchester City Oo Ku Dagaallamaya Adama Traore Kaddib Go'aan Kasoo Baxay Wolves - Gool24.Net
Liverpool Iyo Manchester City Oo Ku Dagaallamaya Adama Traore Kaddib Go’aan Kasoo Baxay Wolves
Wolves ayaa diyaar u ah inay lacag kaash ah ku beddelato xiddigeeda afka hore ee Adama Traore kaddib markii uu tababare Nuno Espirtio Santo loo sheegay inuu lacag u helo saxeexyada cusub ee uu doonayo inuu kooxdiisa kusoo kordhiyo.
Mulkiileyaasha kooxda ee Fosun International oo naadigan iibsaday sannadkii 2016kii ayay jug weyni kasoo gaadhay fayraska korona oo si weyn u saameeyey dhaqaalahooda, waxaana bishii September ee sannadkii hore oo ahayd xataa ka hor Fayraska, ay doonayeen inay £50 milyan oo amaah ah usii qaataan lacagta kooxda kasoo geli doonta baahinta telefishannada.
Tababare Nuno oo kooxdan keenay kaalinta toddobaad ee horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkii hore ayaa lagu wargeliyey inuu iibiyo qaar ka mid ah ciyaartoydiisa lacagta badan u goynaya ka hor inta aanu ku fikirin inuu ciyaartooyo cusub kusoo kordhiyo safkiisa.
Labada ciyaartoy ee laf-dhabarta u ah Wolves ee Raul Jimenez iyo Adama Traore ayay hadda kooxdu diyaar u tahay inay dhegaysato dalabyada laga soo gudbinayo, waxaana weeraryahanka reer Mexico raadinaysa Juventus oo ciyaartooyo ay ugu beddesho iyo lacagba diyaar ula ah, halka Traore uu yahay hantida ugu qaalisan ee ay kooxaha waaweyn intooda badani raadinayaan.
Liverpool iyo Manchester City ayaa markii ay ogaadeen go’aanka kooxda Wolves waxay isku diyaarinayaan inay u baratamaan weeraryahanka 24 jirka ah ee orodka badan leh, iyadoo tababare Pep Guardiola oo haysta lacag badan oo kaash ah oo loogu dhiibay inuu suuqa kaga soo adeegto uu qayb ka mid ah qorshaynayo inuu dul-dhigo.
Laakiin Liverpool oo in badan lala xidhiidhiyey laacibkan orodka badan, isla markaana saamaynta badan leh ayaa isaguna raadsanaya fursadaha uu kula soo saxeexan karayo.
Traore ayaa xirfaddiisa kasoo bilaabay Barcelona ka hor intii aanu tegin Aston Villa iyo Middlesbrough ka hor intii aanu laba sannadood ka hor £18 milyan oo Gini ugu wareegin Wolves.